Iindaba - Zisebenza njani iipavile
Ukuhambisa umgangatho ngezinto eziphantsi kokuhambisa umthwalo omkhulu, inkampani yethu yamkela ezona zinto zinxiba kakhulu, ezinganyangekiyo, ezomeleleyo, ezilindeleke ukuba zisebenze ixesha elide.
Uyilo lokuhambisa umva ngobukrelekrele obukhulu. Ngamanye amagama, ufakelo lwayo aludingi sikrufu, esinokugcina ixesha elininzi. Ngokusebenzisa indibaniselwano yemathiriyeli yokunxiba enganyangekiyo kunye nekhonkco lokuhambisa elinamandla aphezulu, ixesha lenkonzo lomatshini liqinisekisiwe ukuba lide ngokwaneleyo. Ngaphandle koko, ukunxiba enganyangekiyo izinto zebhleyidi isetyenziswa ngokunjalo ukufezekisa unxibelelwano, ukufezekisa ukufakela okufanelekileyo kunye nokwandisa ubomi benkonzo.
Umsebenzi wayo kukuhambisa imathiriyeli ukusuka kwi-hopper iye kwi-blade ejikelezayo. Ubukhulu bepheyiji encinci ubukhulu buye bugqitywe ngokuhambisa ngokuthe tyaba ngelixa ubukhulu obukhulu kunye nobukhulu obuphakathi buhamba ngokuhamba ngokuhamba.
Umgaqo osebenzayo wokuhambisa i paver yomgangatho ungachazwa ngolu hlobo: Ikhonkco liqhuba iscraper esithe tyaba sokutyibilika phantsi. Ngokuqokelelwa kwezinto, ipavile ithwala izinto ngegeyithi, yiyo loo nto isenza ukuhamba kwezinto ezithile ezihambayo, eziqhubeka nokunyuka ziye encotsheni yentsimbi ejikelezayo. Amanqaku abalulekileyo kuyilo lwenkqubo yokuhambisa isikhuseli seepavile zezi zilandelayo: Okokuqala, isantya sesikrwelo siyakubalwa ukuhlangabezana neemfuno zemveliso yepavile; Emva koko, amandla okutshiza aya kuthi ngokuthe ngcembe ahlengahlengise ade ahlangabezane neemfuno zepower paver. Ke ngoko i-paver inokujikwa kwisindululo sokusebenza kwaye isebenze kakuhle.
Thina i-Xuzhou Chengzhi Construction, njengomthengisi wezinto ezingasasebenziyo kumatshini wokuhambisa umgangatho, sinika izinto ezahlukeneyo zomatshini, kubandakanya umva wenqanawa. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga neemveliso zethu, wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ukuze ufumane ulwazi oluthe kratya. Sijonge ukubonelela abathengi ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nokusebenzela abathengi ukuba boneliseke. Ngokubanzi, sijonge ngokunyanisekileyo kwintsebenzo yeshishini yexesha elide kwaye ngokuqinisekileyo siya kuhlala siqhubela phambili ukudala ikamva elithembisayo.